News - Sida loo kala saaro maaskaro KN95
Sidee loo kala saaraa maaskaro KN95
In kasta oo cudurka cusub ee loo yaqaan 'coronavirus epidemic' la bilaabay, haddana mas'uuliyiinta xeerarka suuqa iyo ururada macaamiisha ee dhammaan heerarka kala duwan waxay ku baaqeen daacadnimo ganacsi iyo maareynta sharciga u hoggaansan. Si kastaba ha noqotee, weli waxaa jira ganacsiyo badan oo aan damiir lahayn oo ka soo horjeeda dabaysha oo iibiya waji been abuur ah si looga faa'iideysto faa'iidada sharci darrada ah. Gaar ahaan marka maaskaro jaban, saaxiibo badan ayaa ka walwalaya inay iibsadeen waji been abuur ah, sidaa darteed hadda waxaan la wadaagayaa qaar ka mid ah. Aqoonta sida loo sheego in maaskaro ay run tahay iyo in kale.
Hadda, waji-faneedka cusub ee coronavirus waa maaskaro qalliin iyo maaskaro KN95. Sida laga soo xigtay Ururka Macaamiisha ee Beijing, waxaa jira saddex lakab oo kala sooc ah oo loogu talagalay maaskarada qalliinka caafimaadka. Markaad iibsaneyso, waxay xaqiijinayaan in YY0469-2011 ay ku jirto baakadka. Iyo heerka maaskaro qalliinka YY0469-2011 uu yahay maaskaro qalliinka caafimaad ee caadiga ah.
xiriirkeena maalinlaha ah ee wajiyo badan oo KN95 ah, Ururka Macaamiisha Beijing, oo ay weheliso maaskaro 3M ugu caansan, sidoo kale waxay siisaa hab lagu kala saaro runta iyo beenta
Urka: Maaskaro 3M ma laha wax ur gaar ah, waxay kaliya shaqeysaa kaarboon, oo leh ur fudud oo kaarboon firfircoon, mana jirto ur caag ah.
2. Fiiri daabacaadda: dhammaan noocyada ku qoran 3M waji ayaa lagu daabacay laser, calaamadaha daabacadduna waxay muujinayaan xagal u eg xagasha 45, halka kuwa beenta ah ay yihiin daabacaadda khadadka. Intaa waxaa dheer, daabacaadda khadku badanaa waxay u horseedaa khad aan sinnayn. Gaar ahaan, raadadka daabacaadda ee 3M waji oo dhab ah ayaa xariijimo ah, halka maaskarada beenta ahna ay yihiin dhibco wareegsan. Intaa waxaa sii dheer, maaskarada dhabta ah waxay muujinayaan inay la jaan qaadi karaan lambarka socodka ee baakadka Dhinaca kale, badeecadaha been abuurka ah ma sameyn karaan.
3. Fiiri astaanta iyo shahaadeynta: La logo iyo shahaado QS laguma daabaco sanduuqa, laakiin waxay leeyihiin laba sumadood oo yaryar. Ilaa iyo inta waji-xidhayaasha aan guryaha ahayn si rasmi ah loo soo dhoofinayo, waa inay sidoo kale haystaan ​​shahaadada La, halka kuwa waji-xidhayaasha guryaha ahi waa inay haystaan ​​shahaadada QS iyo La.
Sida laga soo xigtay Ururka Macaamiisha ee Beijing, macaamiisha ayaa wici kara 12315 si ay u soo sheegaan badeecadaha been abuurka ah. Waxaan rajeynayaa in xilligan halista ah ee faafa, ganacsatada aan damiirka lahayn ay toobadkeeni karaan sida ugu dhakhsaha badan ee suurtogalka ah, si aan waqtigeena aan caadiga aheyn ugu nabad galno.
Xusuusin Yirentang mask:
Dadka caadiga ah, aad ayey uga waxtar badan tahay in loo oggolaado maaskarada N95 ee xaddidan inay aadaan furimaha dagaalka oo ay hubiyaan badbaadada shaqaalaha caafimaadka, taas oo aad uga waxtar badan marka loo eego xirashada wejigooda kaligood. Intaa waxaa dheer, in badan oo ka mid ah u diyaargarowga safka hore ee dagaalka, ayaa si habsami leh macaamiisha caadiga ahi u iibsan karaan waji duubis.
Soosaarid ballaaran oo ah maaskaro N95
la dagaallanka fayrasku waa dagaal cilmiyeysan. Anagu hadaan nahay dadka caadiga ah ma ahan inaan kaliya ilaalino nafteena, laakiin sidoo kale ma ahan inaan dhibaato u horseedno dalka. Waa inaan isku daynaa sida ugu fiican ee aan ugu bixi karnaa si waafaqsan xeerarka qaranka. Waa inaan qaadnaa tillaabooyin ilaalin ah marka aan baxayno. Waxaan rajeyneynaa in faafida ay sida ugu dhaqsiyaha badan u gudbi doonto. Waxaan rajeyneynaa in howlwadeenada caafimaadka safka hore ay isdifaaci karaan.